Iyo nhoroondo yenhoroondo, imwe yeanonyanya kuverengerwa subgenres | Zvazvino Zvinyorwa
Chii chinonzi nhoroondo yenhoroondo?
John Ortiz | | Type, Mabhuku, Novela, dzakawanda
Iyo nhoroondo yenhoroondo rondedzero subgenre inogumira kune isina kuchinjika zviitiko zvechokwadi sechibatiso chechikamu chayo., inogona kana isingashandise uye inosanganisa mavara chaiwo nezvinhu zvekunyepedzera. Kwayakabva yakadzokera muzana ramakore rechiXNUMX, panguva yeEuropean Romanticism. Kubva pamaoko evanyori vakaita saVíctor Hugo, Fontane kana James Fenimore Cooper, pakati pevamwe.
Pamusoro peiyo nhoroondo yeSpanish-American nhoroondo, Ana García Herranz (2009) anoti:
"… Inosanganisira mazana maviri emakore enoverengero anotora pane nhoroondo yekugadzirisa kwavo, asi izvo zvinochengeta zvakafanana zvakafanana pakati pavo; Chiitiko chenyika uye yevaSpanish-maAmerican postmodern nhoroondo yenhoroondo inonyanya kusiyaniswa neyakafanana, iyo inofanirwa kuumba maviri maseru mukati meiyo mhando yenhoroondo yenhau.
2.1 National episode nhoroondo yenhau
2.2 Postmodern nhoroondo yenhau
3 Mhando dzenhoroondo yenhoroondo
3.1 Nhoroondo yekunyepedzera nhoroondo
3.2 Nhoroondo inopesana nekufungidzira
4 Aya mashanu epasirese nhoroondo
4.1 Hondo kumagumo enyika naMario Vargas Llosa
4.2 Mhuri yeCave Bear naJean Marie Auel
4.3 Talos dzeSparta naValerio Massimo Manfredi
4.4 Ini, Claudio naRobert Graves
4.5 Makoronike eWarlord naBernard Cornwell
Panyaya iyi, Kurt Spang (s / f) anotsanangura:
"Nhoroondo yenhoroondo, nekuda kwehunhu hwayo hwakasanganiswa, inomutsa chinetso chakati sezvo ichienda pamusoro pechinyorwa chakanyatsojeka, ndiko kuti, mune imwe pfungwa inobata pachikamu chekutanga, icho chekutaura kusiri kwekunyora kwemazwi. Asi haisi yakachena nhoroondo uye zvakare haisi yakachena nhoroondo kana inoverengeka: inoita "hiatus pakati penhema nenhoroondo."
Icho-chisarura- rudzi rwekutaurirana kwemashoko asiri ekunyepedzera neimwe nhanho yekubvisa. Mariri, zviitiko zvinorondedzerwa sisitimu zvakanangana nekutsvagisa kwepamutemo, kwakanyorwa, uye kwakatsigirwa. Kunyangwe rondedzero ichienderana nemaonero emunyori, izvo zvekunyepedzera hazvifanirwe kukunda musimboti wezviitiko chaizvo.
Nhasi, nhoroondo yenhoroondo irworudzi rwakabudirira, nevanyori vakashandisirwa kumhando dzakasiyana siyana dzemanyowani.. Sechimiro chakajairika ivo vanogara vachisanganisa inozivikanwa nguva mukati menguva. Naizvozvo, inogona kuratidza fungidziro chaiyo yezvakaitika kare nemidziyo yekunyora meta-fungidziro uye hunhu hwakakurumbira.
National episode nhoroondo yenhau
Ivo vanotsanangura nhoroondo yezvakaitika kuburikidza nemagamba protagonists, kana, kana zvirinani, vane hunhu hwakabatana nehushingi. Zvimwechetezvo, mumunyika yenhoroondo enganonyorwa chirevo chacho ndechemunyori wezvenguva dzekare, uko murondedzeri chapupu chakaona nemaonero ekuzviisa pasi. Aya maitiro anonzwisisika kubata mukati mekupokana kwe Zvikamu zvenyika naGaldós kana Mhete yeIberia yeValle-Inclán.
Nenzira imwecheteyo, musimboti werudzi rwechiitiko nhoroondo nhoroondo inowanzo kuve iri kure nerudo kana zvisinganzwisisike nhoroondo. Iko, zvinoitika zviitiko zvezvakaitika zvinoiswa mukuvandudzwa kwechirongwa chekunyepedzera. Nechikonzero ichi, inoratidza chinangwa chedzidzo yezvematongerwo enyika, iine hunhu hwakajeka.
Postmodern nhoroondo yenhau
Mune iyi mhando yenhoroondo yenhoroondo zvimwe zvinowanzoitika zvikamu zvinokanganiswa nemaune nekuvapo kwezvinhu zvisingawanikwe, hyperbole kana kusiiwa. Ndokunge, chinangwa chayo chiri padyo nekuita kuverenga kwakaomarara kwekare pane kuratidza rondedzero inoenderana neyakajeka nhoroondo.
Uye zvakare, anoshandisa anozivikanwa manhamba enhoroondo (echikamu chekutanga) uye anoshandisa akawanda mareferenzi ekutaurirana. "Nhoroondo dzenhema" ndedzechokwadi kana dzikasachinja zvakanyanya kukosha kwechiitiko chakataurwa. Nekudaro, kusiyana neyakaitika yenyika nhoroondo, parody inowanzoitika
Mhando dzenhoroondo yenhoroondo
Nhoroondo yekunyepedzera nhoroondo
Mune yekunyepedzera nhoroondo yenhau, munyori anoedza kuvhara zviitiko zvinotsanangurwa nechidzitiro chechokwadi uye chokwadi. Nekudaro, chinangwa ndechekupa pfungwa yechokwadi muchiono chemunyori. Naizvozvo, ndima dzakagadzirirwa nemunyori neumboo hunosimbisa vhezheni yake yezviitiko hazvishamise. Kunyange hazvo, humbowo uhu hwaigona kungotsigira chikamu cherondedzero.
Pamusoro pezvo, chikamu chezvidzidzo zvouMwari chinotorwa kuti chionekwe chinzvimbo chemunyori (nekubatanidzwa) muzviitiko. Iyo inductive kugona kwemunyori kuti aratidze izvo chokwadi mune zvakati kana zvishoma kubatana nzira kwakakoshawo. MuSpain, mazita akadaro Doña Blanca weNavarra naNavarro Villoslada kana Ishe weBembibre de Gil naCarrasco, vamiriri veiyi subgenus.
Nhoroondo inopesana nekufungidzira
Iyo anti-illusionist nhoroondo yenhau yakaonekwa zvine simba muEurope pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX nekugamuchirwa kwakapararira kuzuva ranhasi. Mariri, munyori wenhoroondo anowanzo ratidza kusarudzika kwezviitiko zvinotsanangurwa nekuda kwekududzirwa kwezviitiko zvakasarudzika. Ipapo, munyori anofanirwa kunge achiunganidza mutsara wenyaya unosanganisira zvikamu zvekunyepedzera.
Nekudaro, zvichienzaniswa neyakaitika nhoroondo yekunyepedzera, ino subgenre inopa yakanyanya kuzviisa pasi munyori. Iko chinzvimbo chemubati chiri kure uye chisina kukanganiswa nekuvandudzwa kwezviitiko. Iyi ficha inogona kucherechedzwa mu Ides yaKurume naWilder kana mu Mabhizimusi aVaJulius Caesar yeBrent.
Aya mashanu epasirese nhoroondo
Hondo yekuguma kwenyika naMario Vargas Llosa
Mune ino novel, Vargas Llosa zvinotora sechirevo shanduko yeCanudos yakaitika muBrazil pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX. Ikoko, kusaruramisira uye nharaunda isina kugadzikana zvakatungamira kune kunonzi "kumukira kwevasina nhaka" nekuda kwemirairo yaCouncillor. Iko kunamatira uye chishamiso chinova chinhu chimwe chete chinokwanisa kumutsira vakadzvinyirirwa kurwisa masimba.
Bako rebheya mhuri naJean Marie Auel
Iye munyori anotakura chiito kusvika padanho rekupedzisira reiyo Ice Age, apo kudengenyeka kwenyika kwakakonzera kupatsanurwa kwemusikana ane makore mashanu - Ayla - kubva kurudzi rwake. Iye anokwanisa kupona nekutenda kune boka revaNeanderthal vanomupa pekugara uye kudzivirira. Asi ramangwana mutungamiri wemhuri haapedze kugamuchira kuvapo kwake uye anotyisidzira kuvapo kwemusikana mudiki. Nekudaro, anodzivirirwa nemweya weCave Shumba.
Talos dzeSparta rakanyorwa naValerio Massimo Manfredi
Hondo yekuguma kwenyika.
Talos akanunurwa nekare Helot (dzinza rakaiswa muuranda) paakasiiwa sechibairo kumapere nababa vake, Aristarcos, anokudzwa anobva kuSparta.. Izvi zvakagadziriswa netsika yekare yevaSpartan. Talos anokura uye anova chimiro chechiporofita: Aristodemus, wekupedzisira mambo weHelot akafanirwa kusunungura vanhu vake.
Ini, Claudio rakanyorwa naRobert Graves
Munyori akatora mabasa aTacitus, Plutarch naSuetonius sehwaro hwekupokana kwake kwakakurumbira, uko kunopa nhoroondo yeupenyu hwaTiberius Claudius pachake. Inodzoreredza nguva yeropa yedzinza raJulio-Claudius nehumambo hweRoma, kubvira pakupondwa kwaJulius Caesar (44 BC) kusvika pakuurawa kwaCaligula (41 BC). Icho chimwe che iyo inozivikanwa nhoroondo nhoroondos yenguva dzese.
Makoronike ehondo yehondo rakanyorwa naBernard Cornwell
Kutevera kudzingwa kwevaRoma kubva kuBritain, kukakavadzana kwakatanga kuzadza zemo remagetsi rakagadzirwa. Mordred, mugari wenhaka (achiri mucheche) wamambo mukuru, Uther Pendragon, anochengetedzwa nemurwi anonzi Arthur, anodzivirirwa nesvikiro Merlin. Iyo yekupedzisira chishuwo chisiri pamutemo chaPendragon uyo anoshuvira kuchengetedza kubatana kwehumambo uye kudzivirira kuti irege kuwira pasi pejoko revaSaxon.
Iri zita ndere trilogy, rakaumbwa nemabhuku anotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Chii chinonzi nhoroondo yenhoroondo?
Kukosha kwekudanwa kunzi Ernesto